Afọ 25, Ahịa Globalwa
Na 1996, YUFA malitere iji akara "YUSHEN", ọ na - ewekarị oke dị ka njirisi, mepụta ọtụtụ alumina ntụ na nyocha ọkachamara na mmepe. Mgbe 25 afọ nke mmepe na management, "YUSHEN" ika ngwaahịa na-ere ọma na ihe karịrị mba 40 n'ụwa. O nwetala ikike ibubata na mbupụ nke China na 1999, wee bụrụ ụlọ ọrụ ama ama ama ama na mpaghara Asia-Pacific, nwekwara aha ụfọdụ na ahịa mba ụwa dịka Japan, South Korea, Germany, wdg.
Akara Akara, Nkwado Ogo
Iji hụ na ịdị mma, YUFA Group nakweere ọkụ 6m nnukwu ọkụ maka 24h na-agbaze agbaze. Ọ dịghị eme ka ụkpụrụ dị jụụ n'oge na njikwa njikwa nke agbaze, na-ekwusi ike na ịmịpụta ngwaahịa dị elu, wee merie ahịa ahịa na asọmpi ahụ na ngwaahịa mma.
Ndi mmadu n’enweghi, ndi mmadu ka anyi nma
"YUSEHN" ika "sodium dị ala, micro sodium, nnukwu nnukwu njupụta" na ụdị ndị ọzọ na-acha ọcha corundum abrasive ngwaahịa ka ekwuputala nke ọma n'ahịa, ma nwee ike mepụta pụrụ iche ahaziri iche na gbanwetụrụ ọcha corundum abrasives dịka mkpa ndị ahịa si dị. Kemgbe afọ 2008, "YUSHEN" a na - egosi akara ọcha corundum abrasives (F4-F220, P12-P220) na ọcha alumina ntụ ntụ (F230-F1200, P240-P2500) ka akpọrọ "ngwaahịa ama ama na ụlọ ọrụ abrasives nke China".